ရောသမမွှေပါ|အလှကုန် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ |ZhiTong
အကြိုရောသမမွှေစက်|အလှကုန် စက်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားတူ ခရင်မ်ရောစပ်စက်
8. ပမာဏ 10 လီတာမှ 150 လီတာအထိ
1.အလှကုန် စက်ပစ္စည်းယူနစ်တစ်ခုတွင် ရောစပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ emulsifying၊ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း၊ လေဟာနယ်၊ အပူပေးခြင်း နှင့် အအေးပေးခြင်း၏ ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်။
2. အချိန်ပိုကြာကြာ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် စက်ပြင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက် အအေးခံစနစ်၊
3.Full system သည် ယူနစ်တစ်ခုတွင် ရောနှောခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ emulsifying၊ တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ လေဟာနယ်၊ အပူပေးခြင်း နှင့် အအေးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါရှိသည်။
4.အလှကုန် စက်ပစ္စည်းhomogenizer1-3000R/min နှင့် agitator 1-63R/min အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။
5.အလှကုန် စက်ပစ္စည်းယူနစ်တစ်ခုတွင် ရောစပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ emulsifying၊ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း၊ လေဟာနယ်၊ အပူပေးခြင်း နှင့် အအေးပေးခြင်း၏ ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်။
6.Cooling စနစ်အတွက်စက်ပြင်တံဆိပ်၏အလှကုန် စက်ပစ္စည်းတူညီသောအချိန်ပိုကြာအောင် homogenizer အတွင်း၊
7..Full system သည် ယူနစ်တစ်ခုတွင် ရောနှောခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ emulsifying၊ တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ လေဟာနယ်၊ အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များပါရှိသည်။
8. homogenizer1-3000R/min နှင့် agitator 1-63R/min အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်း၊
9. တစ်ယူနစ်တွင် ရောစပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ emulsifying၊ တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ လေဟာနယ်၊ အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးပြည့်စုံခြင်း။
10. အချိန်ပိုကြာကြာ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေစေရန် စက်ပြင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက် အအေးခံစနစ်၊
11.Full system သည် ယူနစ်တစ်ခုတွင် ရောနှောခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ emulsifying၊ တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ လေဟာနယ်၊ အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါရှိသည်။
၁၂။အလှကုန် စက်ပစ္စည်းhomogenizer1-3000R/min နှင့် agitator 1-63R/min အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။
13. အဆိုပါ emulsifying အကျိုးသက်ရောက်မှု မြင့်မားသောအခြေခံ viscosity နှင့်မြင့်မားသောအစိုင်အခဲအကြောင်းအရာများ၏ပစ္စည်းများအတွက်ပိုမိုထင်ရှားသည်။
14. ပင်မအိုးတွင် နို့တိုက်ကျွေးမှုကို စောင့်ကြည့်သည့် emulsification နှင့် အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါ၀င်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ များစွာပါရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာပုံစံကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၁၅။အလှကုန် စက်ပစ္စည်းဆီနှင့်ရေအိုးမှပစ္စည်းများသည် အချိုးကျအဆို့ရှင်မှတစ်ဆင့် တူညီသောအမျိုးအစားကို တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းကာ အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
16.Bottom homogenization မုဒ်- အောက်ခြေ homogenization သည် 0-3000 RPM၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းအမြန်နှုန်း စည်းမျဉ်း၊ emulsification သည် ပိုမိုပြီးပြည့်စုံပြီး စေ့စပ်သေချာပြီး ထုတ်ကုန်သည် လက်ရာမြောက်သည်။
17. ဆီအိုး၊ ရေအိုး- အပူပေးခြင်းနှင့် စွန့်ကြဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ပစ္စည်းအား အပူပေးခြင်း၊ စွန့်ကြဲခြင်းနှင့် နှိုးဆော်ခြင်း 960 RPM တွင် လူစုခွဲနိုင်သည်
18. သုံးဆရောစပ်ခြင်းသည် မတူညီသော နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အမြန်နှုန်း ချိန်ညှိမှုအတွက် တင်သွင်းလာသော ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာတာကို လက်ခံပါသည်။
19. လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်အရ၊အလှကုန် စက်ပစ္စည်းတိုင်ကီကိုယ်ထည်သည် လျှပ်စစ်အပူကို အပူပေးပြီး အအေးပေးနိုင်သည်။
20.Three-layers stainless steel tank.တိုင်ကီသည် သံချေးတက်ခြင်း၊ အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း၊ တောက်ပပြီး အဖိုးတန်သော အင်္ဂါရပ်များပါရှိသော အရည်အသွေးမြင့် SS316 ပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားသည်။320 mesh ကြိတ်ခြင်း ပွတ်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် GMP စံနှုန်းကို နှစ်ခုလုံးသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အသွင်အပြင်ရှိသည်။
21.ဘွိုင်လာကိုယ်ထည်အား တင်သွင်းလာသော SS အလွှာ3အလွှာ၊ တိုင်ကီကိုယ်ထည်နှင့် ပိုက်များကို GMP စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် မှန်ပေါလစ်ဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။
22. တစ်လမ်းသွားမွှေခြင်း၊ နှစ်လမ်းသွားမွှေခြင်း၊ ဝက်အူကြိုးနှစ်လမ်းမွှေခြင်း၊ ဝက်အူကြိုးတစ်ကြောင်းမွှေခြင်း၊ ကျောက်ဆူးရောစပ်ခြင်း အကြိမ်ရေအမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ 0-63 RPM၊ teflon ခြစ်စက်၊ အချိန်မရွေး၊ အိုးကိုမွှေပြီး အိုးနံရံကပ်စေးနဲသောအရာကို ခြစ်ထုတ်ပါ။
23. ပင်မဘွိုင်လာအဖုံးသည် ရုတ်သိမ်းခြင်းစနစ်ကို လက်ခံနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူပြီး သန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပို၍ထင်ရှားသည်၊ ပင်မဘွိုင်လာသည် တိမ်းစောင်းနေသောအထွက်ကို လက်ခံနိုင်သည်။
24.The vacuum material ofအလှကုန် စက်ပစ္စည်းနို့စို့ခြင်းကို လက်ခံထားပြီး အထူးသဖြင့် အမှုန့်ပစ္စည်းများအတွက် ဖုန်စုပ်စုပ်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန် ဖုန်မှုန့်များကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
25. လေဟာနယ် ညစ်ညမ်းခြင်း သည် ပစ္စည်းများကို ပိုးသတ်ခြင်း၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ဖုန်စုပ်စုပ်ပစ္စည်းများသည် ဖုန်စုပ်စက်ဖုန်မှုန့်များကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
26. Vacuum emulsifier ပင်မအိုး-ပင်မအိုး ဟိုက်ဒရောလစ် lifting. stainless steel အလွှာသုံးလွှာ၊ လူကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြောနိုင်သည်။ပစ္စည်းဝင်ပေါက်၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ လေဟာနယ် အဆို့ရှင်၊ ကြည့်မှန်၊ လေစစ်၊ ရေမွှေးပျံ့စသည်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။
27.lift ofအလှကုန် စက်ပစ္စည်းသန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူသော အိုး၏ အပြင်ဘက်သို့ ရောစပ်ထားသော စနစ်။
၂၈။ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ အချိန်တိုင်းကိရိယာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အသံဖမ်းစက်တို့သည် ထိန်းချုပ်မှုအင်္ဂါရပ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
၂၉။အလှကုန် စက်ပစ္စည်းဖုန်စုပ်စနစ်ဖြင့် အိုးကို -0.095MPa အောက် လေဟာနယ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
30.ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို လေဟာနယ်လုပ်ဆောင်ချက်0 အင်ဗာတာနှင့် လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ဘောက်စ်ဖြင့် ဤရောနှောထဲသို့ တိုက်ရိုက်စုပ်ယူနိုင်သည်။
31.Burgmann စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပျ၊ ရေလည်ပတ်အအေးခံခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့်တူတူဖော်စပ်ခြင်းထပ်တူပြုခြင်း၊ NSK ဝက်ဝံ၊ Siemens မော်တာ၊ Panasonic ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာတာ။
32.ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအိုးနှစ်လုံးစလုံးတွင် သီးခြားအပူပေးခြင်း၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ကျက်ခြင်းစနစ်တို့ပါရှိသည်။ပင်မအိုး၏ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားမှတစ်ဆင့် ပင်မအိုးထဲသို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်စုပ်ယူနိုင်သည်။
တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း- ဆေးဝါး emulsion၊ ဆီမွှေး၊ ခရင်မ်၊ မျက်နှာဖုံး၊ ခရင်မ်၊ တစ်ရှူးများကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ ဖျော်ရည်၊ ပုံနှိပ်မင်၊ ယိုဆေးမှင်- စေးဆေး၊ အတွင်းနှင့် အပြင်ဆေး၊ ရေအခြေခံ သုတ်ဆေး၊ နာနိုဆေး၊ သုတ်ဆေး၊ မှင်၊ မှင်၊ အထည်အလိပ်ဆိုးဆေး၊ ဆိုးဆေး၊ စသည်ဖြင့် ၅၊ ဇီဝဆေးဝါး- သကြားအပေါ်ယံလွှာ၊ ပရိုတင်း စွန့်ထုတ်မှု၊ ဆေးခရင်မ် စသဖြင့် ပေါင်းသတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးဆီ၊ ပိုးသတ်ဆေးထည့်၊ ဓာတ်မြေသြဇာ စတာတွေ
1.power supply: three phase : 220v 380v .415v။50HZ 60HZ
2. Capacity : 10L မှ 150L ထိ။
4.Heating method: လျှပ်စစ်အပူနှင့် ရေနွေးငွေ့အပူပေးခြင်း ရွေးချယ်မှု။
5.control system plc ထိတွေ့မျက်နှာပြင်။သော့အောက်ခြေ။
6.Fixed type သို့မဟုတ် Hydraulic lifting type သို့မဟုတ် Pneumatic lifting။
8.SIP သည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တောင်းဆိုချက်အရ ရနိုင်ပါသည်။
ယခင်- အပေါ်ပိုင်း Homogeneous motor|Cosmetic Emulsifier ဖြင့် လေဟာနယ် ရောစပ်စက်
နောက်တစ်ခု: PLC နှစ်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ ဖုန်စုပ်စက် ရောစပ်စက်|အလှကုန် စက်ပစ္စည်း